April 2020 - Page 2 of 5 - Puntland Mirror Believable Media Website
Dowladda Soomaaliya oo dakhli ku dhow $200 milyan lumisay coronavirus dartiis
April 24, 2020 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dakhli ku dhow $200 milyan ayay lumisay Dowladda Federaalka Soomaaliya sababtoo ah dhibbaatada xanuunka coronavirus, sida uu sheegay wasiirka maaliyada. Wareysi uu wasiirka maaliyada Cabdiraxmaan Ducaale Bayle siiyay BBC Somali ayuu ku sheegay […]
April 23, 2020 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) 42 kiis oo cusub oo coronavirus ah ayaa laga helay Soomaaliya maanta oo Khamiis ah, sida lagu sheegay bayaan lagu daabacay bogga Twitter-ka Somalia COVID-19 oo ay maamusho Wasaaradda Caafimaadka. Labo qof ayaa […]
Madaxweynaha Jubbaland oo heshiis la galay siyaasiyiin mucaaradsanaa
Nairobi-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan iyo madaxweynayaasha-ismagacaabay Cabdirashiid Maxamed Xidig iyo Cabdinaasir Seerar Maax ayaa maanta oo Khamiis ah gaaray heshiis si ay u soo afjaraan khilaafkooda. Hoos ka akhriso bayaanka […]
April 22, 2020 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Tirada dhimashada coronavirus ee Soomaaliya ayaa gaartay sideed qof, taasoo ka dhigaysa dalka labaad ee ugu dhimashada badan Geeska Afrika, sida ku cad xogta Haayada Caafimaadka Adduunka ee WHO. 49 kiis oo cusub […]
Raysulwasaare Khayre oo saaxiibada Soomaaliya kula taliyay in taageeradooda ay u weeciyaan la dagaalanka COVID-19
April 21, 2020 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta oo Talaado ah mareegta internet-ka shir kula yeeshay saaxiibada Soomaaliya. Kulanka ayaa looga hadlay xaalada uu marayo xanuunka coronavirus gudaha Soomaaliya, sida lagu sheegay […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) 73 kiis oo cusub oo coronavirus ah ayaa laga helay gudaha dalka 24-saac ee la soo dhaafay, sida Wasaaradda Caafimaadka Dowladda Federaalka Soomaaliya ku sheegtay war-saxaafadeed xalay fiidkii. Hal qof ayaa xanuunka u […]
April 20, 2020 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Tirada kiisaska xanuunka coronavirus ee gudaha Soomaaliya ayaa korortay. 29 kiis oo coronavirus ah ayaa 24-saac ee la soo dhaafay laga helay Soomaaliya, sida ay sheegtay Wasaaradda Caafimaadka Dowladda Federaalka Soomaaliya. Puntland ayaa […]
Puntland oo xaqiijisay kiiskeedii ugu horeeyay ee coronavirus
April 19, 2020 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa xaqiijisay kiiskeedii ugu horeeyay ee xanuunka coronavirus, sida uu caawa sheegay Wasiirka Caafimaadka Puntland Jaamac Faarax Xasan. Bukaanka ayaa ah muwaadin Soomaaliyeed oo aan dalka ka bixin, sida wasiirku uu sheegay. […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) 19 kiis oo cusub oo coronavirus ah ayaa laga helay gudaha Muqdisho 24-kii saac ee la soo dhaafay, sida ay sheegtay Wasaaradda Caafimaadka Dowladda Federaalka Soomaaliya. Dhammaan dadka laga helay cudurka coronavirus ayaa […]
Kiisaska COVID-19 gudaha Soomaaliya oo gaartay 116
April 18, 2020 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasaaradda Caafimaadka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay 36 kiis oo cusub oo coronavirus ah la helay 24-kii saac ee la soo dhaafay. 27 kamid ah dadka laga helay xanuunka ayaa ah rag halka […]
Garowe-(Puntland Mirror) A consultation workshop on Garowe strategic urban development plan has opened at PDRC in Garowe on Tuesday. In the workshop, it was participated officials from the government, including Garowe mayor, Mohamed Hassan Godir, [...]
Al-Shabab attack on Afgoye town kills at least five
Mogadishu-(Puntland Mirror) At least five people including three Somali government forces and two Al-Shabab fighters were killed after heavy fighting erupted in Afgoye town between the Somali army and Al-Shabab militants on Monday, an official [...]